လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၇၉ Volkswagen T10279 Camper Van အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
13 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Dimitri 500 Views စာ 1 မှတ်ချက် 10187 Volkswagen ပိုးတောင်မာ, 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏, 10265 Ford ကား Mustang, ၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274, 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန်, 10295 Porsche 911, Creator Expert, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, reviews, စံနစ်, Volkswagen က
လူကြီးများအတွက် Lego 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် ပိုကောင်းသည်နှင့်ပိုဆိုးသည်ကားလက်တွေ့ဘ ၀ မော်တော်ယာဉ်၏အလွန်တိကျမှန်ကန်သောအပန်းဖြေမှုဖြစ်သည်။
Volkswagen T2 Camper Van သည် ၁၉၆၀ နှင့် ၇၀ ပြည့်နှစ်များယဉ်ကျေးမှုများအကြားတွင်ရေပန်းစားသောကြောင့်ယင်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တူသောအဆင့်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်၊ အုပ်စုကြီးများအတွက် ၀ င်ရောက်ရန်အဆင်ပြေသည်။ အခြားမည်သည့်မော်တော်ကားမျှမတူလွတ်လပ်မှုကိုပေးသည်။
ထိုခေတ်အခါကဂီတပွဲတော်များနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည့်ကမ်းခြေများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးကားများဖြစ်သည်။ စက်များတွင်အယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောစက်များမဟုတ်သော်လည်းနာမည်ကြီးနေသည်။
10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် အထင်ကြီးစရာ 2,207 part့အတွက်ဖြန့်ချိခံရဖို့ဒုတိယအကြီးဆုံးမော်တော်ယာဉ်အောင် s လူကြီးများအတွက် Lego (ယခင် Creator Expert) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 150 နည်းပါးလာ p မှာလာမယ့်) subthemeartအကြီးဆုံးမော်ဒယ်ထက် ၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274.
နှစ်စဉ်တစ်နှစ်စီ၏အရည်အသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်၊ partတွင်တွေ့မြင် s ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကို လူကြီးများအတွက် Lego မော်ဒယ်တွေအားလုံးတိုးတက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့်ဒီ Camper Van ခရီးစဉ်ဟာထိုက်တန်ပါတယ်။
theme: လူကြီးများအတွက် Lego အမည်သတ်မှတ်မည် - 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 149.99 / $ 179.99 / € 159.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,207 အသေးစားပုံများ: 0
အဆိုပါ Lego Group နှင့် Volkswagen တို့သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်နာမည်ကျော် VW တံဆိပ်ဖြင့်ကစားစရာများစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Lego တစ်နှစ်အားဖြင့်စနစ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ရှေ့သို့သွားပါ၊ ပရိသတ်တစ် ဦး အနိုင်ရပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည် Lego ထုတ်လုပ်သူတီထွင်သူကားမော်ဒယ်သည် ၁၀၁၈၇ Volkswagen Beetle ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ပရိတ်သတ်များသည်တိကျမှုနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Beetles နှင့် Camper Vans များသို့ကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုင်းဘုတ်များကဤနောက်ဆုံးပေါ်ကြားဖြတ်မှုသည်အသေးဆုံးဆုံးနှင့်အစစ်မှန်ဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်။
အဆောက်အ ဦး ထဲကိုမ ၀ င်ခင်မှာသေတ္တာကိုမှတ်သားထားသင့်ပါတယ် art။ တစ်ခုချင်းစီကို 18+ set ကိုအတူပါသောယခု - နေရာအနှံ့အနက်ရောင်ထုပ်ပိုး st ဖြစ်ပါတယ်artအနည်းငယ်ပင်ပန်းရရန် ing ။ ဤသို့သောအရာသည်ကမ်းခြေရှိ Camper Van in situ မှနောက်ခံတွင်နေဝင်ချိန်နှင့်အတူလိုက်ပါလာသည့်စခန်းချကုလားထိုင်များ၊
၎င်းသည်မော်ဒယ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်သေတ္တာဟောင်းနှင့်တူညီသည် art ပရိတ်သတ်တွေကိုယခုတစ်နှစ်ခွဲကျော်ကျော်အကြာမှာတင်ခဲ့တာပါ။ နောက်ကျ။
T2 Camper Van သည်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မငြင်းနိုင်သောအထင်ကရဖြစ်သော်လည်း Porsche 911 (သို့) Aston M တို့၏ပါးလျောနှင့် sexy curves များမရှိသေးပါ။artDB5 သို့မဟုတ် VW Beetle ၏ဇာတ်ဆောင်ပင်ပုံသဏ္evenာန်ပင်ဖြစ်သည်။ အဖွင့်အဆင့်များစွာအတွက်သင်သည်အလွန်ပိတ်ဆို့ထားသောစတုရန်းဘောင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည် 10295 Porsche 911 နှင့် 10265 Ford ကား Mustang, ဒီရုံအတူတူထားရန်အဖြစ်ပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းထက်အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အသုံးချသည့်နည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခိုက်အတန့်များစွာရှိသည်မဟုတ်။ တောက်ပသောအိတ်ဆောင်များရှိသည် - အင်ဂျင်သည်ကောင်းမွန်သောဆပ်ပူးတွဲတပ်ဆင်ထားသည်၊ ရှေ့နှင့်နောက်ဘမ်ပါများသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရှေ့ရှေ့မျက်နှာပြင်သည်ပြီးပြည့်စုံစွာကြည့်သည် - သို့သော်အများစုသည်အများအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကဲ့သို့ခံစားကြရသည်၊ Lego ဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်
၎င်းသည်အပူဆုံးနှင့်ပျက်စီးလွယ်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego သငျသညျအစဉျအမွဲတည်ဆောက်ရန်ဖွယ်ရှိမော်တော်ယာဉ်များ။ အပြင်ပိုင်းအသွင်အပြင်များမှာကားမောင်းသူနှင့်ခရီးသည်တံခါးများဖွင့်ခြင်း၊ ဘေးတိုက်တံခါး (ကိုယ်ထည်အောက်ရှိခလုတ်ငယ်တစ်ခုဖြင့်လည်ပတ်) နှင့်နောက်တံခါးနှင့်ဖိနပ်သေးသေးလေးများပါဝင်သည်။ သူတို့ကကြည့်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းကိုပျော့ပျောင်းတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုချိတ်ဆက်တာကလည်းသိပ်ပျော်စရာမကောင်းဘူး။ ပျော်စရာထက်များသောအားဖြင့် ပို၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်နည်းနည်းလေးဖြင့်ထိတွေ့မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြိုကျသည်။
၎င်းသည်သင်၏အရည်အချင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရှိလိမ့်မည် Lego ဆောက် - အကယ်စင်စစ်တစ် ဦး Lego အစုံသည်ဤပျက်စီးလွယ်မဖြစ်နိုင်ပါ; အကယ်စင်စစ်လမ်းတစ်လျှောက်အမှားလုပ်ခဲ့ရကြမည်နည်း ရှေ့ဘမ်ပါ၊ နောက်ဘမ်ပါ၊ အင်ဂျင်၊ နောက်ဘွတ်နှင့်ပေါက်သောခေါင်မိုးအားလုံးသည် p ရှိရန်အလွန်လွယ်ကူသောအခါartကျိုးပဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကျိုးပဲ့ခြင်းသို့တည်းမဟုတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင်တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းသွားသည်။
အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါကတည်ဆောက်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုအနည်းငယ်ပေးသည်။ မီးဖိုချောင်ယူနစ်ကိုယ်နှိုက်သည် ၂ × ၂ နှင့် ၁ × ၂ ကွင်းခတ်ကို သုံး၍ အလွန်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောစုဝေးမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိုရည်များနှင့်ရေခဲမုန့်များနှင့်ပြည့်နေပြီးရေခဲသေတ္တာ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊ နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ရေနွေးအိုးတို့ပါဝင်သည်artp ဖြစ်သောအရာများအတွက် s ကိုအသုံးပြုမှုarticularly မှုတ်သွင်း။
သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့အသွင်အပြင်သာမကအတွင်းပိုင်းအရာဝတ္ထုများလည်း VW Camper Van ထဲမှာအလုပ်လုပ်သလိုအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါဗီရိုဖွင့်လှစ်, စားပွဲပေါ်မှာလှိမ့်လှိမ့်ခေါက်နှင့် 'ကျောက်ဆောင်နှင့်လိပ်' 'အိပ်ရာ (ကကျောက်တည်ခြင်းနှင့်ထို့နောက်အနေအထားသို့ထွက်လှိမ့်သောလမ်း၏အမည်ဖြင့်) နှစ် ဦး စလုံးကျောက်တုံးများနှင့်သင့်သည်အတိုင်းလမ်းရှင်းပြီ။ အထူးသဖြင့်ပြတင်းပေါက်များထည်များထည်ကုလားကာများပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်မော်ဒယ်တွင်တိကျမှန်ကန်သောအလွှာတစ်ခုကိုပေါင်းထည့်သည်။
pop-up ခေါင်မိုးသည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသောဆပ်စည်းရုံးခြင်းဖြစ်သည် နည်းပညာ ခေါင်မိုး၏ 'popping' အရေးယူဖန်တီးသော shock absorbers နှင့်ထုပ်နှင့်အတူဘောင်။ ထို့နောက်ကြွေပြားများနှင့်ကွေးသောအကြွပ်များကိုထိပ်ဖုံးရန်အသုံးပြုသည်။ မြှင့်တင်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အစု၏နောက်ဆုံးပုံသဏ္soာန်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးသည် - ၎င်းသည်မကြာခဏပြုလုပ်ရန်ကိုလျှော့ချရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ တ ဦး တည်းကြည့်ရွေးချယ်ပါကလမ်းကိုစောင့်ရှောက်။
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကြွေပြားအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အနည်းဆုံးကျေနပ်စရာကောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အလယ်တောက်ပသောအရောင်နှင့်အဖြူရောင်အရောင်များသည်တကယ့်ကိုတကယ့်ကိုမှန်ကန်ပြီးပုံသဏ္,ာန်သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့ပင်တော်တော်လေးထင်ရှားသည်။ တစ်လျှောက်လုံးတွင်အသုံးပြုသောသော့ခလောက် - မဟုတ်သည့်ထိပ်တန်းနည်းစနစ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံစံကိုဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်သည်။
အံ့သြစရာကအပျော်ရွှင်ဆုံး part တည်ဆောက်ပုံ၏အမှန်တကယ်မှာအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - အပြာရောင်၊ အပြာ၊ လိမ္မော်ရောင်နှင့် tan surfboard နှင့်ခေါက်နေသောစခန်းထိုင်ခုံနှစ်ခု - အံ့ဖွယ်နည်းပါးသောတည်ဆောက်မှုများဖြစ်ပြီးခေါက်ယန္တရားအတွက်ပါ ၀ င်သောတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာနှင့်အတူ။ သူတို့ကရိုးရှင်းပေမယ့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာကွပ်ကဲနိုင်၊ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိအာကာသထဲသို့မယုံနိုင်လောက်အောင်မြုပ်နှံထားခြင်းနှင့်တည်ဆောက်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောလမ်းကိုဖန်တီးသည်။ ဒီတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးကိုပျံ့နှံ့သွားတာမျိုးဒီလိုအချိန်မျိုးများများများမရှိတော့တာပဲ။
အဆုံးရလဒ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန် စကေး, authenti ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင် palescity နှင့်ခြုံငုံကြည့်။ ပန်းပွင့်စွမ်းအားနှင့် surfing motif ပါသည့်ရွေးချယ်နိုင်သောစတစ်ကာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
သူကပြောတာကအိမ်ခေါင်မိုးနဲ့အတူသူဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမဟုတ်ဘူး Lego ကားကိုအစဉ်အမြဲမောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့သော်ခေါင်မိုးပေါ်သို့တက်ပါ၊ တံခါးကိုဖွင့်ပါ၊ ၀ င်းဒိုးကိုဗင်ကားပေါ်တွင် တင်၍ စခန်းထိုင်ခုံများကိုဖွင့်ပါ။ အရာအားလုံးသည်လမ်းခရီးနှင့် surfing အားလပ်ရက်များ၏ပုံရိပ်များကိုချက်ချင်းပေါ်ပေါက်စေသည်။
၎င်းသည် set ကိုပြသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမထိရန်၊ မရှူရန်သတိမထားမိရန်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောလမ်းကိုပင်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာအရာအားလုံးသည်ဖြိုဖျက်နေသောအုတ်များပုံထဲသို့ကျသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။
များအတွက်စံအလေ့အကျင့်ဖြစ်သကဲ့သို့ လူကြီးများအတွက် Lego မော်တော်ယာဉ်အစုံ, အဘယ်သူမျှမ minifigures ပါဝင်သည်။ သို့သော် 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် အားလပ်ရက်ခရီးသွား akers ည့်သည်များ၏ပုံရိပ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အပိုပစ္စည်းအနည်းငယ်နှင့်အတူလာသည်။
ထည့်သွင်းထားသော 2,200 ကျော်အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန်, လက်လီတန်ဖိုးကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ရက်ရောပုံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော 2018 ရဲ့အဖြစ်အလားတူအစုံ 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏, 2019 ရဲ့ 10265 Ford ကား Mustang နှင့်ယခုနှစ်ပါပဲ 10295 Porsche 911 သာအနည်းငယ်စျေးနှုန်းချိုသာခဲ့ကြပေမယ့်လမ်းနည်းပါးလာပါရှိသောပါရှိသည်arts.
သူကပြောသည်ခံရကြောင်း, ထိုအစုံသုံးခုလုံးအဘို့တည်ဆောက်အတွေ့အကြုံကဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဖြစ်ရာထက်လမ်းပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ သင် p ကိုတန်ဖိုးထားလျှင်art အရေအတွက်နှင့်နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှရရှိသောခံစားမှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကို၎င်းသည်ညှိနှိုင်းမှုအနည်းငယ်အဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ သို့သော်တည်ဆောက်ပုံ၏ပျက်စီးလွယ်သောသဘောသဘာဝသည်၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်ဟူသောသဘောနှင့်ကွာဝေးပါသည်။
ပြီးတာနဲ့ပြီး 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် VW Camper Van ၏အမှားမကင်းသော၊ အထင်ကရဗေဒကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အလွန်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောပုံစံဖြစ်သည်။ VW တံဆိပ်၏ပရိသတ်များသည်စစ်မှန်မှုကိုနှစ်သက်ကြမည်မှာသေချာသည်city နှင့်ဤအစုံကမ်းလှမ်းတိကျမှန်ကန်မှု၏အဆင့်ဆင့်။ သို့သော်၏ပရိသတ်များ လူကြီးများအတွက် Lego ယေဘုယျအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ်များတည်ဆောက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအတော်လေးစိတ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်စတိုင်ကျသည့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောမော်ဒယ်များကဲ့သို့အလွန်ပျော်စရာကောင်းမည်မဟုတ်ပါ 10295 Porsche 911 သို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ ၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274။ : Partတည်ဆောက်ပုံ၏ s သည်မလိုအပ်သောရှုပ်ထွေးမှုကိုခံစားရပြီးအခြားသူများကမူအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
၎င်းသည်ကြီးမားသောအသွင်အပြင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ရွေ့လျားရန်အလွန်နူးညံ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များ p မခံစားရဘူးarticularly ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဖို့ရန်အတော်လေးနာကျင်မှုဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အဖြစ်မှန် -bits ပုံမှန်ကျဆင်းသွားရုံခဏအကြာတွင်နှောင့်အယှက်ဖြစ်လာသည်။
ဒီဟာကတကယ်အကြံပေးလိုတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကသင်ရှာနေတဲ့အရာပဲ Lego အစုံ အကယ်၍ သင်သည် st မှအတွေ့အကြုံရှိပြီးဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုပြီးလျှင်art ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် လူကြီးများအတွက် Lego ထွက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်လျောက်ပတ်စွာကြည့်ပြီးလျှင်သင် Lego ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေပြသရန် Camper Van (၎င်းကိုထိစရာမလိုပါ) သို့မှသာအချို့သောမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးကိုရောက်နိုင်ပါမည်။
လူကြီးများအတွက် LEGO 10279 Volkswagen T2 Camper Van အတွက်ဘယ်လောက်ကြာကြာတည်ဆောက်မလဲ။
10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည် လူကြီးများအတွက် Lego (ယခင် Creator Expert) မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းအပြီးသတ်ဖို့န်းကျင်ငါးနာရီမှခြောက်နာရီကြာပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်နှစ်ယောက်အပိုင်းပိုင်း၌ရှိကြ၏ လူကြီးများအတွက် Lego 10279 Volkswagen T2 Camper Van?
10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် VW Camper Van အပြင် surfboard နှင့်ခေါက်သိမ်းထားသောကုလားထိုင်များဆောက်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောအပိုင်းအစ ၂,၂၀၇ ခုပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထက် ၈၇၅ ပိုဒ်ပိုများသည် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်.
ဘယ်လောက်ကြီးတယ် လူကြီးများအတွက် Lego 10279 Volkswagen T2 Camper Van?
10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် ၁ စင်တီမီတာရှည်၊ ၁၄ စင်တီမီတာကျယ်ပြီး ၃၅ စင်တီမီတာရှည်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန် ကိုယ့် 30cm ရှည်လျားတိုင်းတာ။
ဘယ်လောက်မ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၇၉ Volkswagen T10279 Camper Van ကုန်ကျသလား။
10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်ယူကေတွင်ပေါင် ၁၄၉.၉၉၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁၇၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၁၅၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
← Lego Marvel Shang-Chi အနုပညာပိုစတာ
ဗွီဒီယိုသုံးသပ်ချက် - လူကြီးများအတွက် LEGO 10279 Volkswagen T2 Camper Van →
တစ်ခုမှာ "အရွယ်ရောက်သူများအတွက် LEGO 10279 Volkswagen T2 Camper Van ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ကြည့်ရတာအလွန်ကောင်းမွန်ပေမယ့်အလွန်ကိုဒေါသထွက်ပါတယ်"
ခေါင်မိုးကိုကောင်းကောင်းပိတ်လို့မရဘူး။ ၎င်းသည်တစ်ခုခုကိုပိတ်နေပုံရသည်၊ ၎င်းကိုသင်တွန်းမချနိုင်ပါ။ မင်းမှာဒီပြသနာရှိလား။